Dongguan Yuechuang automatique Fitaovana Co. Ltd. (YC) Niorina tamin'ny 2007, dia avo-teknolojia orinasa manokana ao amin'ny fivorian'ny connector milina sy ny tsy faneva fivoriana automatique fitaovana sy ny fitaovana R & D, famolavolana, orinasa mpamokatra entana, varotra, fametrahana, fanitsiana , tolotra ara-teknika ao anatin'ny iray, dia miorina ao amin'ny Road Yang Yang Science Park, Gate dimy Min Chang Road, Humen Town Gate, Dongguan City, Sina.
Yue Chuang dia fiara connector mandeha ho azy fivoriambe milina mpamatsy, dia manana manan-karena experienceis momba ny 10years in R & D sy ny orinasa mpamokatra entana orinasa, tao amin'ny manan-tsaina, mahomby sy mafy orina ny vokatra hevitra, hentitra mifehy ny famokarana tsara, mba hanome manokana fiara connector fivoriambe milina automatique namboarina vahaolana hitsena ny tena ilain'ny famokarana fiara connector, mba hanampiana ny mpanamboatra hanao connector automatique pamokarana fampivoarana dia mavesatra asa Vatana, ny notsorina dingana famokarana, milamina vokatra tsara, hanatsarana ny famokarana fahombiazana, mba hanatsarana ny fiara connector manufacturers'production fahombiazana sy ny mifaninana amin'ny orinasa ...
Efa-tombony ny vokatra
(1) Yue Chuang za-draharaha dia manana ekipa fampandrosoana injeniera, mifantoka amin'ny fikarohana, famolavolana, ny famokarana sy ny varotra ny connector automatique fitaovana ho an'ny 10 taona.
Anarana mpanjifa mitsidika
Interplex California orinasa fanaterana sy ny fifanakalozana ara-teknika
Rosiana mpanjifa mitsidika
Interplex ara-teknika fototra any Rhode Island
Rosiana mpanjifa nitsidika Yuechuang ho an'ny fifanakalozana ara-teknika
TDK mpanjifa fitsidihana
Company vaovao >>
80%! An-toerana ambadiky ny sehatra mahery fo amin'ny T-fiara - Gaopin automatique
Mifantoka amin'ny tsena ny fiara iray manontolo, Ampitomboina ny Turbo mitombo hatrany ny fironana lasa ny mahazatra. Karazana fiara rehetra ireo fitaovana amin'ny "T".
Industry vaovao >>
DSM nandefa vaovao mahatohitra hydrolysis-PBT amin'ny fitaratra fibre afa-po ny 30% izay azo amin'ny ampahany ...
Mifototra amin'ny siansa sy ny teknolojia, ny Holandey Royal DSM Group, izay miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny sakafo sy ny fitaovana maneran-tany ...